काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताएका छन । देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाले आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास उनको छ । प्रस्तुत छ : राससका लागि रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक छन् । सबै आर्थिक परिसूचकको समष्टिगत रूप भनेको आर्थिक वृद्धि नै हो । त्यसैमा कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्र समेटिएर आउँछन् । हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौँ र यो वर्ष पनि हामी निरन्तर अघि बढ्नेमा छौँ । कतिपय अन्तर्रा्ष्ट्रिय संस्थाले यस वर्ष पनि छदेखि सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । अलिकति धानको उत्पादनमा सामान्य ह्रास आएको स्थिति छ, त्योबाहेक अन्य परिसूचक राम्रा छन, हामी लक्ष्यको नजिकै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौं ।
कार्य्विधि भनेपछि के हुन्छ भने त्यसको मस्यौदा हुन्छ, मन्त्रीले स्वीकृत गर्छ, मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को समितिमा जान्छ, समितिमा छलफलमा भएर फेरि त्यो मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ, त्यो निर्णय भएर प्रमाणित हुन्छ । प्रमाणित भएर मन्त्रालय आउँदा छिटोछिटो भयो भने पनि दुई महिनाको चक्र त्यहाँ लाग्दो रहेछ । एउटा हाम्रो कार्यगत ‘स्टेप’को कारणले ढिलाइ भएको यो कुरा रह्यो ।
एक/दुई वटा विवादहरु छन, ती भनेका कानूनी विवाद हुन् । उदाहरणका लागि वनको कर, वन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन् । त्यसो भएकाले वनको राजश्व सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक सबैको दावी हो । त्यो भएर कानूनबाटै हामीले मिलाउनुपर्ने छ । सम्पत्ति कर स्थानीयलाई दिइएको छ । हाम्रा नगरपालिका यस्तो पनि छन, जो खेतीयोग्य जमीन छन् । खेतीयोग्य जमीनको बीचमा घर बनाएर कोही बसेको छ । हेर्दाखेरी सम्पत्तिमा परिभाषित गरियो । नगरपालिकाले यो सम्पत्ति हो भन्छ, कृषक जो खेतमा बसेका छन् ऊ भन्छ, यो त खेती गरिरहेको जमीन हो । मालपोत तिर्नुपर्ने जमीन हो, कहाँ सम्पत्तिकर तिर्ने । दुवैका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता विवाद पनि अहिलेको बजेटबाट हामीले केही मिलायौँ । मूलतः मूल्याङ्कनमा समस्या छ । त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कति गर्ने र जनतालाई कति कर लगाउने ? तिर्न सक्नेमात्र कर लगाउने हो नि ? त्यसो हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र परिभाषामा केही मिलेको छैन । व्यक्तिको घरबहाल कर स्वतः स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानून छ । तर, संस्थाले आफ्नो घरबहालमा दिएको छ भने त्यो आयकरमा जोडिन्छ जुन सङ्घमा छ ।
गत आवमा सङ्घले बजेट दिएन भनेर प्रदेशले भनिरहँदा अहिले उनीहरु अहिले चुपचाप छन, प्रदेशले अहिले विगतकै बजेट खर्च गरिरहेका छन् कि प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन, तपाईंको बुझाइ के रह्यो ?